MUM 2017 National Costume | Miss Universe Myanmar
Home » MUM 2017 National Costume
MUM 2017 National Costume
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင်မှမရှိသော တူရိယာပစ္စည်း အစုအဖွဲ့မှာ မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မီးရောင်များအောက်က စင်မြင့်ပေါ်တွင် ခန့်ညားထည်ဝါသော မြန်မာ့ရိုးရာ ဆိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာတူရိယာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီးကို ရှေ့တည့်တည့်မှ မြင်ရသော မြင်ကွင်းကို ပုံဖော်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့တည့်တည့်မှမြင်ရသော မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီးမှ ပတ်ဝိုင်းကြီးပုံကို မယ်စကြာဝဠာမြန်မာအလှမယ် ဇွန်သံစဉ်မှ ပုဝါဖြင့်သိုင်းကာ လက်ဖြင့်ဆွဲယူ သယ်ဆောင်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးမှနောက်ဘက်တွင် ခေါက်ယူလာသော ကြေးဝိုင်း၊ ပတ်မဝိုင်းနှင့် ပဉ္စရူပတို့ကို ဖြန့်ချပြသမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီးပုံကို ဖြန့်ချပြသလိုက်သည့်အခါ ညာဘက်တွင် ကြေးဝိုင်းနှင့် မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘယ်ဘက်တွင် ပတ်မဝိုင်းနှင့် ပဉ္စရူပ၊ ၄င်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော ပတ်မကြီးနှင့် မောင်းတို့ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတွေ့မြင်ရသော အစိတ်အပိုင်းများကို မြန်မာ့ရိုးရာလက်မှုရွှေခြည်ထိုးဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပါသည်။ ပတ်ဝိုင်းကြီး၊ ကြေးဝိုင်း၊ ပတ်မဝိုင်းတို့ကို ကျွန်းသစ်ဖြင့် ဘောင်ပြုလုပ်ပြီး ထိုကျွန်းပြားပေါ်တွင် မြန်မာမှု မှန်စီရွှေချလက်မှုပညာများဖြင့် အလှဆင်ထားပါသည်။ ဝါးလက်ခုတ်၊ ယကွင်း၊ နှဲစသော မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီးကို တီးသည့်အခါ ပါဝင်အားဖြည့်ရသည့် မြန်မာ့တူရိယာပစ္စည်းများကို မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းဆိုင်းဘုတ်အောက်တွင် ချိတ်ဆွဲပြသထားပါသည်။
ဆိုင်းဝိုင်းကြီးအား ဆိုင်းတီးပုံဖြင့် သရုပ်ဖော်ပြသပေးသူ မယ်စကြာဝဠာမြန်မာအလှမယ် ဇွန်သံစဉ်၏ ဝတ်စုံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်းသမီးများ၏ ဝတ်စုံကို မှီငြမ်းပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားပါသည်။ မင်းသမီးဝတ်စုံ၏ အဆင်တန်ဆာများကို မြန်မာ့လက်မှုရွှေခြည်ထိုးဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး ရွှေသားစစ်စစ်များ ထည့်သွင်း အလှဆင်ထားပါသည်။ တိမ်တောင်ဆံထုံးကို အလှဆင်ထားသော ရွှေကနုတ်ပန်းခက်နှင့် ရွှေကြိုးတို့ကို ရွှေသားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
“Myanmar Traditional Orchestra”
“Myanma Hsaing Waing” isamusical ensemble that you can see only in Myanmar. It was appeared in Kanboung Dynasty and it’sagrand one which takes the main place on bright stage. The scene describes the front view of Myanma Traditional Musical ensemble “Hsaing Waing” on straight. The replica of Pat Waing will be wrapped and drawn by Miss Myanmar “Zun Than Sin”. Then the folded Brass Drums, Big Drums and Pyin Sa Rupa will be displayed by unfolding.
When it is unfolded, Brss Drums along with the name board of the band can be seen on the right side. Big Drums & Gong hanging from Pyin Sa Rupa and also the Side Drums can be seen on the left. All of these things are made up of Myanma Tradional gold embroidery. Pat Waing, Brass Drums and Big Drums are framed by the teak and also decorated in mosaic on every teak flat. Reinforcing musical instruments like bamboo claps, cymbals and oboe are also displayed by hanging under the name board.
Miss Myanmar “Zun Than Sin” will perform asaHsaing Saya, and her dress ins innovatd upon those of Kanboung Dynasty actresses. The ornaments are made up of Myanma traditional gold embroidery and it is also decorated with gold. Gold chain and decoration Ka Note Pan of main wig are also made up of gold.
ဇွန်သံစဉ် (Miss Universe Myannmar 2017)
Designer - Dr Thazin Khin
Makeup - ကျော်မိုး
Photo And Retouch - Kingsman Photo Club
Location - ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်